30,000 ton remubatanidzwa fetiraiza yekugadzira mutsara - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Mutsetse wepagore wekugadzira wemakumi matatu ematani efoni yemubatanidzwa mubatanidzwa wemidziyo yepamberi. Low kugadzirwa mutengo uye yakakwirira kugadzirwa kunyatsoshanda. Remubatanidzwa fetiraiza yekugadzira mutsara inogona kushandiswa kune granulation yezvinhu zvakasiyana siyana zvinoumbwa mbichana. Chekupedzisira, komputa yemanyowa ine huwandu hwakasiyana uye mafomula inogona kugadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa, kunyatsozadza zvinovaka muviri zvinodikanwa nezvirimwa, uye kugadzirisa kupokana kuri pakati pekudiwa kwezvirimwa nekuwanikwa kwevhu.
1. Iyo mbishi zvinhu zvakajairika inochinjika uye inokodzera granulation yemubatanidzwa fetiraiza, mushonga, kemikari indasitiri, chikafu uye zvimwe zvigadzirwa mbichana, uye chigadzirwa granulation chiyero chakakwirira.
2. Njodzi yekugadzira inogona kuburitsa kukosheswa kwakasiyana siyana, kusanganisira fetiraiza yemushonga, fetereza inorganic, fetiraiza yezvipenyu, manyowa yemagineti, nezvimwewo.
3. Mutengo wakaderera, basa rakanakisa. Fekitori yedu inogadzira uye inotengesa yega seyakananga mutengesi kuti ipe huwandu hwevatengi mabhenefiti pamutengo wakanakisa. Uye zvakare, kana vatengi vaine matambudziko ehunyanzvi kana mibvunzo yegungano, vanogona zvakare kutaurirana nesu nenguva.
4. Fetereza yemubatanidzwa inogadzirwa mumutsetse wekugadzira uyu une hunyoro hushoma hwekutora mwando, uri nyore kuchengeta, uye unonyanya kushomeka pakuisa michini.
5. Iyo yose mukomboni fetiraiza yekugadzira mutsara yakaunganidza makore mazhinji ehunyanzvi ruzivo uye kugona kugona. Iyi inoshanda uye yakaderera-simba remubatanidzwa fetereza yekugadzira iyo yakagadziriswa, yakagadziridzwa uye yakagadzirirwa, kubudirira kugadzirisa matambudziko ekushomeka uye kudhura pamusha nekune dzimwe nyika.
Maitiro kuyerera kwekomboni fotereza yekugadzira tambo inowanzo kuve yakakamurwa kuita: mbishi zvinhu zvinoshandiswa, kusanganisa, granulation, kuomesa, kutonhora, kudonhedza, kupedzisa kupfeka, uye yekupedzisira yapera kurongedza.
Zvinoenderana nezvinodiwa pamusika uye mhedzisiro yevhu yemuno mhedzisiro, urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium thiophosphate, ammonium phosphate, diammonium phosphate, heavy calcium, potasium chloride (potassium sulphate) uye zvimwe zvinhu zvakasvibirira zvinogoverwa mune chimwe chikamu. Yakawedzerwa uye inoteedzera zvinhu zvinoshandiswa sezvinhu zvinosanganiswa mune chimwe chikamu kuburikidza nezviyero zvebhandi. Zvinoenderana neiyo muyero wefomula, zvese zvakasvibirira zvinhu zvinosanganiswa zvakaenzana kubva pamabhanhire kuenda kuvasanganisi, maitiro anonzi premixes. Iyo inovimbisa iko kurongeka kwekuumbwa uye inoziva inoshanda uye inoenderera uye inoshanda zvigadzirwa.
2. Zvinhu zvakasanganiswa zvakasanganiswa:
Horizontal chisanganiso chinhu chakakosha chikamu chekugadzira. Inobatsira iyo mbishi zvinhu kusanganisa zvizere zvakare uye nekuisa hwaro hwepamusoro-hunyanzvi uye hwemhando yepamusoro granular fetiraiza. Ini ndinogadzira imwechete-ekisero yakatwasuka musanganisi uye kaviri-axis yakatwasuka musanganiswa kusarudza kubva.
Granulation ndiyo yepakati chikamu chemukomboni fotereza yekugadzira mutsara. Sarudzo yegranulator yakakosha kwazvo. Yedu fekitori inogadzira diski granulator, dhiramu granulator, roller extruder kana nyowani komputa fetiraiza granulator. Mune ino inoumba manyowa ekugadzira mutsara, isu tinosarudza rotary dhiramu granulator. Mushure mekunge zvinhu zvasanganiswa zvakaenzana, bhandi rekutakura rinotakurirwa kumuchina wedhiramu granulation muchina kupedzisa granulation.
Mushure mekutonhora, zvinhu zvine hupfu zvinoramba zviri muchigadzirwa chakapedzwa. Zvese zvakanaka uye zvakakura zvidimbu zvinogona kuongororwa kunze neyedu roller roller. Hupfu hwakatsetseka hwakavhenekerwa hunotakurwa kubva kubhandi rekutakura kuenda kune rinosanganisa kuti rimutse mbishi zvakare kugadzira granulation; nepo hukutu hukuru husinga svike padiki hunodiwa hunofanira kutakurwa kuti hunopwanywa neketani crusher pamberi pegirazi. Chigadzirwa chakapedzwa chichaendeswa kune mukomboni fotereza yekupfeka muchina. Izvi zvinoumba yakakwana yekugadzira kutenderera.